တရုတ်နိုင်ငံက အိုမီခရွန်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ရှန်ဟိုင်းသို့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ၄၀,၀၀၀ နီးပါးစေလွှတ် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ရှန်ဟိုင်းမြို့၌ တစ်ကျော့ပြန်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ကူညီရန် သွားရောက်မည့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား ဧပြီ ၃ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ရှန်ဟိုင်း၊ ဧပြီ ၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ပြည်နယ်အဆင့် ဒေသ ၁၅ ခုမှ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ၃၈,၀၀၀ ကျော်အား တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး အချက်အချာဖြစ်သော ရှန်ဟိုင်းသို့ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ (COVID-19) တစ်ကျော့ပြန်ဖြစ်ပွားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကူညီရန် စေလွှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအနက် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ၂၇,၀၀၀ ခန့်သည် နမူနာရယူခြင်းနှင့် ရောဂါစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် နောက်ထပ် ၁၁,၀၀၀ မှာမူ ယာယီဆေးရုံများ၌ လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသား ကျန်းမာရေးကော်မရှင်အရ သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ချုံမင်ခရိုင်ရှိ China Flower Expo ဥယျာဉ်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါလက္ခဏာပျော့သူများနှင့် ရောဂါလက္ခဏာမပြသူများအတွက် ယာယီဆေးရုံအား ဧပြီ ၃ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ချုံမင်ခရိုင်ရှိ nucleic acid စစ်ဆေးနေရာတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးထံမှ တို့ဖတ်နမူနာ ရယူနေသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား ဧပြီ ၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ရှန်ဟိုင်းမြို့တွင် ဧပြီ ၅ ရက်က ကိုဗစ်-၁၉ ဒေသတွင်း ရောဂါကူးစက်မှုအတည်ပြုလူနာ ၃၁၁ ဦးနှင့် ဒေသတွင်း ရောဂါလက္ခဏာမပြသည့် ရောဂါပိုးသယ်ဆောင်သူ ၁၆,၇၆၆ ဦးရှိကြောင်း သိရသည်။
မတ် ၁ ရက်မှစ၍ လူပေါင်း ၉၀,၀၀၀ ခန့်မှာ ကူးစက်မြန် အိုမီခရွန် မျိုးဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုခံရပြီးဖြစ်ကြောင်း ရှန်ဟိုင်းမြူနီစီပယ် ကျန်းမာရေးကော်မရှင်မှ အချက်အလက်များအရ သိရသည်။
Shanghai Hongqiao ဘူတာရုံ၌ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်အတွင်းက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ထောင်ပေါင်းများစွာနှင့် ကူးစက်ရောဂါ ထောက်ပံ့ပစ္စည်း တန်ချိန်များစွာ သယ်ဆောင်လျက် ရထားပေါင်းများစွာ ပျားပန်းခပ် ပြန်လည်ပြေးဆွဲခဲ့သည်။ ဧပြီ ၃ ရက်နှင့် ၄ ရက်ကြား ပြည်နယ်အဆင့် ဒေသ ၇ ခုမှ စင်းလုံးငှားလေယာဉ် ၂၆ စင်းမှာလည်း ရှန်ဟိုင်းမြို့၏ အဓိကလေဆိပ်ကြီးနှစ်ခု၌ ဆင်းသက်ခဲ့ကြသည်။
“ကျွန်တော်တို့ ဧပြီ ၂ ရက်မှာ အကြောင်းကြားမှုရရှိခဲ့ပြီး ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ၆၀ ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ချက်ချင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ကာ‌ နောက်တစ်နေ့မှာတော့ ရှန်ဟိုင်းကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်” ဟု တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်း ဆန်းတုန်းပြည်နယ်၊ Tai’an မြို့ ဗဟိုဆေးရုံမှ Qi Qin က ပြောခဲ့သည်။
“လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အကြာက ဝူဟန့်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံ အခက်ခဲဆုံး အခိုက်အတန့်ဖြစ်ခဲ့ချိန်က ပထမဆုံး ရောက်ရှိလာကြတဲ့အထဲမှ ရှန်ဟိုင်းက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပါဝင်ပါတယ်” ဟု ဟဲပေပြည်နယ် ဝူဟန့်မြို့၊ ကျင်းယင်းထန်ဆေးရုံ တောင်ပိုင်းဧရိယာရှိ အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်၊ သူနာပြုချုပ် Cheng Fang က ပြောခဲ့သည်။
“ရှန်ဟိုင်းမြို့က ကျွမ်းကျင်သူတွေက တစ်ကိုယ်ရေကာကွယ်မှု အားကောင်းဖို့နဲ့ ဖျားနာလူနာတွေကို ဂရုတစိုက်ကုသမှုများ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာ တစ်ဆင့်ချင်း သင်ကြားပေးပါတယ်။ အခုတော့ ရှန်ဟိုင်းမှာ အခက်အခဲတချို့တော့ ကြုံတွေ့နေရတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ တာဝန်ယူထားပြီး ဖြစ်နိုင်သမျှမြန်မြန် ရောက်လာမှာပါ” ဟု Cheng က ဆိုသည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များစွာသည် ရောဂါကူးစက်မှု အမြောက်အများရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသော ရှန်ဟိုင်းအား ကူညီရန် လာရောက်နေကြပြီဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံက ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ၂၈ ဦးထဲက အချို့ကတော့ ဝူဟန့်မှာ ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး အတွက် ကူညီနေကြပြီး တချို့ကတော့ ချင်းသောင်မှာ ရှိနေကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ အတွေ့အကြုံအရှိဆုံး အထူးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်” ဟု တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဒုတိယမိတ်ဖက် ဆန်းတုန်းတက္ကသိုလ်ဆေးရုံ၊ ဟော်မုန်းရောဂါအထူးကုဌာန တွဲဖက်ဌာနမှူး သမားတော် Teng Tao က ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်က ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်က ဟူပေမှာ ၅၈ ရက်လောက် နေခဲ့တာပါ။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော်တို့ နိုဗယ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အကြောင်း နည်းနည်းလေးပဲ သိထားပြီး အဲဒီအကြောင်းတွေ ပိုပြီးလေ့လာခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ဆောင်ရွက်ချက်တွေ အဆက်မပြတ်မြှင့်တင်နေတာဆိုတော့ ဒါကို အနိုင်ယူနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ အသေအချာပြောရဲတယ်” ဟု ဆန်းတုန်းပြည်နယ်မှ သူနာပြုတစ်ဦးဖြစ်သော Gao Hongyi က ဆိုသည်။
မဆုတ်မနစ်၊ လျင်လျင်မြန်မြန် လှုပ်ရှားမှုများ
တရုတ်နိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် Sun Chunlan ကလည်း ရှန်ဟိုင်းမြို့တွင် ကိုဗစ်-၁၉ (COVID-19) ပျံ့နှံ့မှုကို ဖြတ်တောက်ရန် မဆုတ်မနစ်၊ လျင်လျင်မြန်မြန် လှုပ်ရှားကြရန် ဧပြီ ၂ ရက်က တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
“ဒါဟာ အိုမီခရွန် မျိုးဗီဇပြောင်းဗိုင်းရပ်စ်ကို တိုက်ဖျက်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ တာဝန်နဲ့ ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပြီး လူဦးရေ ၂၅ သန်းရှိတဲ့ မြို့ပြကြီးရဲ့ ပင်မဆောင်ရွက်ချက် ပုံမှန်လည်ပတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်” ဟု Sun က ပြောခဲ့သည်။
ကူးစက်ရောဂါ အခြေအနေ ရှင်းလင်းစွာပုံဖော်နိုင်ရန် ဖြစ်နိုင်သမျှမြန်မြန် nucleic acid စစ်ဆေးပေးနိုင်စွမ်းနှင့် လူထုအဖွဲ့အစည်း ရောဂါစစ်ဆေးမှုတွေကို တိုးတက်မှုရှိစေရန် ၎င်းက တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
ရှန်ဟိုင်းမြို့သည် စီမံခန့်ခွဲမှုအား ယာယီပိတ်ထားသည့် အခြေအနေအောက်တွင် ရှိနေသည်။ ဧပြီ ၃ ရက်တွင် လူထုကိုယ်ခံအားစနစ် စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း ပြီးစီးကာ ဧပြီ ၄ ရက်၌ မြို့တစ်ခွင် nucleic acid စစ်ဆေးမှု ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပြီးနောက် ရှန်ဟိုင်းမြို့သည် ရပ်ရွာလူထုအတွင်း ရောဂါကူးစက်မှု ဖြတ်တောက်ရန်နှင့် နောက်ဆုံး ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါတစ်ကျော့ပြန်ဖြစ်ပွားမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် အသစ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအဖြစ် လူထုရောဂါစစ်ဆေးမှု အသစ်တစ်ကြိမ် လုပ်ဆောင်ရန် ဧပြီ ၆ ရက်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အကျယ်အဝန်း စတုရန်းမီတာ ၁၅၀,၀၀၀ ကျော်ရှိသော ရှန်ဟိုင်း ကမ္ဘာ့ကုန်စည်ပြပွဲ ပြခန်းနေရာနှင့် ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ အပါအဝင် နေရာပေါင်း ၆၀ ကျော်အား ယာယီဆေးရုံများအဖြစ် အသွင်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
စုစုပေါင်း တည်ဆောက်မှုဧရိယာ စတုရန်းမီတာ ၁.၄၇ သန်းရှိသော အမျိုးသား ပြပွဲနှင့် ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာသည်လည်း ကွာရန်တင်း (quarantine) နေရာအဖြစ် ပြောင်းလဲထားပြီးဖြစ်သည်။ ဆောင်ရွက်မှုများ ပြီးစီးခြင်းအပေါ်မူတည်၍ ကုတင် ၄၀,၀၀၀ ဆံ့နိုင်ရန် စီစဉ်ထားသော စင်တာအနေဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ စစ်ဆေးတွေ့ရှိသူများအတွက် ဆေးရုံများအနက် အကြီးဆုံး ဖြစ်လာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။
ဧပြီ ၄ ရက် နံနက်အစောပိုင်းက ချုံမင်ခရိုင်ရှိ China Flower Expo ဥယျာဉ်အား ကုတင် ၂,၇၀၀ ကျော်ဆံ့သော ယာယီဆေးရုံအဖြစ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ရောဂါလက္ခဏာပျော့သော လူနာများနှင့် ရောဂါလက္ခဏာမပြသောလူနာများ ပထမအသုတ်ကို လက်ခံကုသပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့များမှာမူ ရှန်ဟိုင်းနှင့် အန်ဟွေးပြည်နယ်ရှိ ဆေးရုံများမှ ဖြစ်သည်။
စာရင်းသွင်းပြီးနောက် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသည် ၎င်းတို့တွင် ရောဂါများရှိမရှိ၊ ရောဂါလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်မှုရှိမရှိ သို့မဟုတ် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးခြင်းရှိမရှိနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကို တစ်ဦးချင်း အတည်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် နောက်ထပ် စီစဉ်မှုများနှင့် သူနာပြုအစီအစဉ်များကို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လူနာများအား ကုသမှုကို အသေးစိတ် စီစဉ်ထားကြောင်း အန်ဟွေးဆေးတက္ကသိုလ်၏ ပထမမိတ်ဖက်ဆေးရုံမှ Zhu Minghua က ပြောခဲ့သည်။ “ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာရှိသူတွေအားလုံးရဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကို အနီးကပ်အာရုံစိုက်သွားရမယ်” ဟု Zhu က ဆိုသည်။
ရှန်ဟိုင်းပြင်ပမှ ရောက်ရှိလာသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများမှာ ရှန်ဟိုင်းမြို့၏ ဆေးကုသမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးရုံသာမကဘဲ ရောဂါပိုးရှာဖွေတွေ့ရှိမှု စွမ်းရည်ကိုလည်းပဲ ကြီးမားစွာ မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဟူနန်ပြည်နယ်မှ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ၁၀၄ ဦးကလည်း ဧပြီ ၃ ရက်က ချိတ်ဆက်ပါဝင်ခြင်းနှင့်အတူ Shanghai Biotecan Pharmaceuticals ကုမ္ပဏီလီမိတက်အောက်ရှိ ဓာတ်ခွဲခန်း၏ ရောဂါစစ်ဆေးနိုင်စွမ်းသည် သိသိသာသာ မြင့်တက်လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ချောမွေ့လာတဲ့အလျောက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ် ရောဂါစစ်ဆေးနိုင်စွမ်းကလည်း မကြာခင်မှာ tube ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်လွန်တော့မှာဖြစ်တယ်” ဟု ဓာတ်ခွဲခန်း အကြီးအကဲ Wu Shouxin က ဆိုသည်။
ထို့ပြင် Zhang Yuetao ဆိုသူနှင့် ၎င်း၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် ကျဲ့ကျန်းပြည်နယ်မှ ရှန်ဟိုင်းသို့ ဧပြီ ၄ ရက် နံနက် ၂ နာရီက ထွက်ခွာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် မွန်းတည့်ချိန်မတိုင်မီ Songjiang ခရိုင်ရှိ ဒေသခံ ၃၁,၁၂၀ ထံမှ nucleic acid နမူနာများကို ယူဆောင်ရန် တာဝန်ယူထားကြသည်။
ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာမရှိသော အဆိုပါ တာဝန်မှာ စီစဉ်ထားသည်ထက် တစ်နာရီစော၍ ပြီးစီးသွားခဲ့သည်။
“ရှန်ဟိုင်းဒေသခံတွေ ကလေးငယ်တွေတောင်မှပဲ အင်မတန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိပါတယ်” ဟု Zhang က ဆိုသည်။ “ကျဲ့ကျန်းနဲ့ ရှန်ဟိုင်းက မိသားစုတစ်ခုတည်းရဲ့ မိသားစုဝင်တွေပါပဲ။ ပြီးတော့ မီးခိုးငွေ့ထွက်ရှိခြင်းမရှိဘဲ စစ်ပွဲကိုအတူတကွ အနိုင်ရရှိရေး လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်”
ရှန်ဟိုင်းရှိ ဒေသခံများက ၎င်းတို့၏ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားချက်များမှာ လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများပေါ်၌ ပြည့်လျှံနေခဲ့သည်။ နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများက ရှန်ဟိုင်းကို ကူညီရန် လာရောက်နေကြသည်ကို မြင်တွေ့ရပြီးနောက် ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းများက မျက်ရည်များအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပေသည်။ “ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီဖို့ လာရောက်ကြသူများအားလုံးကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်” ဟု ဝူဟန့်မြို့မှ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ဦးက နေအိမ်မှာပင် nucleic acid နမူနာလာရောက်ယူဆောင်ပြီးနောက် သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Source: XinhuaEditor: huaxia2022-04-06 20:04:33
SHANGHAI, April6(Xinhua) — More than 38,000 medics from 15 provincial-level regions have rushed to China’s business hub Shanghai to aid the megacity in its fight against resurging COVID-19.
The Shanghai Hongqiao Railway Station resumed its bustling scene over the past few days, with dozens of trains carrying thousands of medics and tonnes of anti-epidemic supplies pulling in. Between April3and 4,atotal of 26 charter flights from seven provincial-level regions landed in Shanghai’s two major airports.
“We were notified on April 2, immediately formedateam of 60 medics and arrived in Shanghai the next day,” said Qi Qin with the Tai’an City Central Hospital, east China’s Shandong Province.
“Two years ago, when Wuhan and our hospital were in the toughest moment, medics from Shanghai were among the first that arrived,” said Cheng Fang, head nurse of the intensive care unit in the south area of Jinyintan Hospital, Wuhan City of Hubei Province.
“Experts from Shanghai taught us step by step how to strengthen personal protection and treat critically ill patients. Now Shanghai has encountered some difficulties. We are duty-bound and should arrive as soon as possible,” Cheng said.
“Among the 28 medical staff from our hospital, some aided the anti-epidemic fight in Wuhan and some had been to Qingdao. They are the most experienced and elite forces,” said Teng Tao, associate chief physician of the endocrinology department of the Second Affiliated Hospital of Shandong University of Traditional Chinese Medicine.
“I was in Hubei for 58 days in 2020. Back then we knew little about the novel coronavirus, as we learn more about it and constantly improve our anti-epidemic measures, I’m sure we can beat it,” said Gao Hongyi,anurse from Shandong.
“It is an arduous task and huge challenge to combat the Omicron variant while maintaining the normal operation of core functions inamegacity withapopulation of 25 million,” Sun said.
After registration, the medics will confirm one by one the physical condition of the cases — whether they have underlying diseases, developed symptoms or have been vaccinated, and make further arrangements and nursing plans.
Zhu Minghua, from the First Affiliated Hospital of Anhui Medical University, meticulously arranged the treatment of patients. “We must pay close attention to the possible emotions of all the people here,” noted Zhu.
The arrival of medics from outside Shanghai not only enhances the city’s treatment ability but also greatly improves the detection capacity.
With the joining of 104 medics from central China’s Hunan Province on Sunday, the testing capacity ofalab under Shanghai Biotecan Pharmaceuticals Co., Ltd. has been significantly boosted.
“As our cooperation goes smoother, we hope our daily testing capacity can soon exceed 100,000 tubes,” said Wu Shouxin, head of the lab.
“Shanghai residents are very cooperative, even the children behave so well,” said Zhang. “Zhejiang and Shanghai are members of one family and we should work together to win the war without smoke.”
Residents in Shanghai flooded social media platforms to express their gratitude. Many burst into tears after seeing medics from across the country come to help. “Thank you so much for coming all the way to help us,” said an elderly after having the nucleic acid sample taken at home by medical staff from Wuhan.
Photo 1 : Photo taken on April 3, 2022 shows medics departing Tianjin West Railway Station in north China’s Tianjin for east China’s Shanghai to help the megacity fight COVID-19 amid the recent resurgence. (Xinhua/Li Ran)
Photo2: Aerial photo taken on April 3, 2022 showsamakeshift hospital for COVID-19 mild cases and asymptomatic carriers at the China Flower Expo park in Chongming District of east China’s Shanghai. (Xinhua/Ding Ting)
Photo3: A medical worker takesaswab sample fromawoman for nucleic acid test in Changning District of east China’s Shanghai, April 1, 2022. (Xinhua/Jin Liwang)
အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော တရုတ်-နယူးဇီလန် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုသဘောတူညီချက် အသက်ဝင်လာ